सत्ता गठबन्धनले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन लागेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा माग गरेका छन् ।
शनिबार पार्टीको काठमाडौं महानगरपालिकास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसीकाबारेमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे । अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान् । के गर्ने हो ? बोल्नु पर्यो नि ? तर न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न प्रचण्ड । बोल्नु पर्दैन ? जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ?’
उनले चीनसँग सीमा विवाद नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन लागेको बताए । उनले भने, ‘म ठोकुका साथ भन्छु चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन । चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्न समिति किन बनाउनुपर्यो ? मेरो चुनौती छ यो समितिले कुनै ठाउँमा सीमा विवाद देखाओस् ।’
उनले आफ्नो पार्टी नफुटेर चोइटिएको भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट केही बिग्रिएका मानिस मात्र बाहिरिएकाले यसलाई पार्टी फुटेको भन्न नमिल्ने दाबी गरे । माधव नेपाल समूहले स्वार्थका लागि नयाँ पार्टी खोलेको समेत ओलीको आरोप थियो ।
माधव नेपालप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘पार्टीको नाम एस पार्टी रे । त्यो कांग्रेसको एस पार्टी हो।’ माधव नेपालजस्तो यतिसम्म लाज शरम पचेको मान्छे जिन्दगीमा कहीँ पनि देखेको थिइन्। नेपाल मात्र होइन, दुनियाँका धेरै देशमा म पुगेँ। तर माधव नेपालजस्तै शरम पचेको मान्छे कहीँ देखिन ।’
सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ मन्त्रीहरूको नाम टुंग्यायो नेकपा एसले, को-को परे ?
विश्वमा समझदारी र सहयोग बढाउन बहुपक्षवाद : परराष्ट्रमन्त्री
नेपालीलाई जापान प्रवेश गर्न सहज हुँदै, १४ दिन होम क्वारेनटाइनमा बस्नु पर्ने
नारायण खत्रीको निधन भएपछी परिवारलाई ओकायामाका नेपालीद्वारा १ लाख सहयोग
ढकालमाथि भएको हातपातको विरोध गर्दै दोषीलाई कारवाहीको माग
शान्तिपूर्ण वातावरणमा उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरियो:निर्वाचन आयोग
तमू ल्होछार : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने
शेयर बजार : सुधार जारी
अछाममा जीप दुर्घटना, चालकसहित ३ जनाको मृत्यु
नालाको वास्तविक चित्रण चिनारीमा